गोयलको भ्रमण : राजनीतिक सम्बन्धको भर्‍याङ कि गन्तव्य ? – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ११ कार्तिक २०७७, मंगलवार १५:४८
तर, यो आवश्यक थियो ? किनकि अबको दुई हप्तामा भारतका सेनापति औपचारिकरुपमा नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । यदि भारतीय नेतृत्वलाई कुनै सन्देश पठाउनु थियो भने उनीमार्फत नै गर्न सकिन्थ्यो । विशेष दूत स्वीकार गर्दा किन राजनीतिक र कूटनीतिक व्यक्तिलाई पठाउन भनिएन ?
यद्यपि भारतको कर्मचारीतन्त्रको केही ‘रिजर्भेसन’का कारण सो प्रतिवेदन यतिवेला अलपत्र छ । राजनीतिक तहमा नै सम्बन्ध स्थापित भएका कारण दुई देशका बीचमा लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेका विकासका केही परियोजनाहरुमा सन् २०१६ देखि केही प्रगति भएका छन् । विकासका परियोजनालाई लामो समयसम्म होल्न गर्नु हुन्न भन्ने ‘रियलाइजेसन’ भारतको राजनीतिक नेतृत्वमा छ ।
त्यसैले गोयलको भ्रमणलाई उच्च राजनीतिक तहमा संवाद कायम गर्न प्रधानमन्त्रीले भर्‍याङ मात्र बनाएका हुन् कि त्यही गन्तव्य नै हो ? योचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।